သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် Podcast တခုကိုမည်သို့စရမည် (ကျွန်ုပ်ထံမှသင်ခန်းစာများ!) | Martech Zone
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် Podcast တစ်ခုစတင်ရန် (ငါ့ထံမှသင်ခန်းစာများ!)
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်တုန်းက podcast လွှင့်တဲ့အခါကျွန်တော်မှာပန်းတိုင်သုံးခုရှိတယ်။
အာဏာ - ငါ၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှခေါင်းဆောင်များနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏နာမည်ကိုသိစေချင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကျိန်းသေအလုပ်လုပ်ခဲ့ခြင်းနှင့်မယုံနိုင်လောက်သောအခွင့်အလမ်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် - ပူးတွဲအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပသည့် Dell's Luminaries podcast ကိုကူညီခြင်းကဲ့သို့သောကြောင့်၎င်း၏လည်ပတ်စဉ်အတွင်းနားထောင်ခြင်းအများဆုံး Podcasts များ၏ထိပ်ဆုံး ၁% ကိုရရှိခဲ့သည်။
အလားအလာ - ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုရှက်သည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏မဟာဗျူဟာများနှင့်သူတို့၏အကြားယဉ်ကျေးမှုနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်လိုသောကုမ္ပဏီများရှိသည်။ ၎င်းသည်အလုပ်လုပ်ခဲ့ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကုမ္ပဏီများဖြစ်သော Dell, GoDaddy, SmartFOCUS, Salesforce, Angie's List စသည်တို့နှင့်အတူလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
အသံ - ကျွန်ုပ်၏ podcast ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏စက်မှုလုပ်ငန်းရှိအခြားခေါင်းဆောင်များနှင့်ပါရမီရှိသူများဖြစ်သော်လည်းတိုးတက်မှုမရှိသေးသောအခြားခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူမီးမောင်းထိုးပြရန်အခွင့်အလမ်းပေးခဲ့သည်။ Podcast ကိုသူ့ရဲ့မြင်သာမှုနဲ့ရောက်ရှိမှုကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့လူတိုင်းကိုပါ ၀ င်စေပြီးမတူကွဲပြားအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတာမရှက်ပါဘူး။
သူကပြောပါတယ်, ကမလွယ်ကူ သင်ခန်းစာများ -
ကြိုးစားအားထုတ်မှု - အကြောင်းအရာကိုသုတေသနပြုရန်၊ ထုတ်လုပ်ရန်၊ ထုတ်ဝေရန်နှင့်မြှင့်တင်ရန်အားထုတ်မှုသည်အင်တာဗျူးလုပ်ခြင်းထက်များစွာပိုကြာသည်။ ဒါကြောင့်မိနစ် ၂၀ လောက် Podcast တခုကိုပြင်ဆင်ဖို့နဲ့ထုတ်ဝေဖို့ငါ့အချိန် ၃ နာရီမှ ၄ နာရီကြာနိုင်တယ်။ ထိုအချိန်သည်ကျွန်ုပ်၏အချိန်ဇယားထဲမှခဲယဉ်းသောအချိန် ဖြစ်၍ အရှိန်အဟုန်ကိုဆက်လက်ထိန်းထားရန်ခက်ခဲစေသည်။
အရှိန်အဟုန် - ဘလော့ဂ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာများကဲ့သို့ပင် podcasting သည်အလုပ်လုပ်သည်။ သင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်နှင့်အမျှသင်နောက်လိုက်အနည်းငယ်ရရှိသည်။ ဒီအောက်ပါကြီးထွားလာခြင်းဖြစ်သည် ... ဒါကြောင့်အရှိန်အဟုန်သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်အရေးပါသည်။ နားထောင်သူ ၁၀၀ ရှိတဲ့အခါငါမှတ်မိသေးတယ်၊ အခုထောင်သောင်းချီပြီးပြီ။
စီမံကိန်း - ကျွန်ုပ်၏ Podcast အစီအစဉ်၏အစီအစဉ်တွင်ပိုမိုရည်ရွယ်ပါကကျွန်ုပ်သည်လက်လှမ်းမီမှုအမြင့်ဆုံးရရှိနိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ ငါအကြောင်းအရာပြက္ခဒိန်ကိုပြုစုချင်တယ်၊ ဒါကြောင့်တစ်နှစ်ပတ်လုံးငါသတ်သတ်မှတ်မှတ်ခေါင်းစဉ်ကိုအာရုံစိုက်ခဲ့တယ်။ လာမည့်ရာသီအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများကပြင်ဆင်နေသည့်အတွက်ဇန်နဝါရီလအောက်တိုဘာလတွင် e-commerce လဖြစ်သည်ဟုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
ဘာကြောင့် Podcast ကိုစလုပ်သင့်သလဲ။
ငါအထက်တွင်ဖော်ပြထားသောဥပမာများအပြင်, အချို့သောဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ် Podcast တခုကိုကလေးမွေးစားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောစာရင်းအင်းများ အဲဒါကိုစူးစမ်းလေ့လာရကျိုးနပ်ပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိလူ ဦး ရေ၏ ၃၇% သည်ပြီးခဲ့သည့်လက Podcast တခုကိုနားထောင်ခဲ့ကြသည်။
၆၃% သောလူများဟာသူတို့ရဲ့ပြပွဲမှာ podcast ၀ န်ဆောင်မှုပေးတဲ့ပစ္စည်းကို ၀ ယ်ခဲ့ကြတယ်။
၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် podcast နားထောင်ခြင်းသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိလူပေါင်း ၁၃၂ သန်းအထိတိုးပွားလာမည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။
Businessfinancing.co.ukယူကေရှိသုတေသနနှင့်သတင်းအချက်အလက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ထုတ်ဝေသူတစ် ဦး ကစီးပွားရေးဆိုင်ရာဘဏ္financeာရေးနှင့်ချေးငှားခြင်းသည်သင်၏ Podcast ကိုရယူရန်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးကိုဖြတ်သန်းသွားရန်သင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအလုပ်တစ်ခုလုပ်သည်။ သတင်းအချက်အလက် Podcast တစ်ခုစတင်ရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်တစ်ခုအတွက်လမ်းညွှန် အောက်ပါအရေးကြီးသောအဆင့်များအတိုင်းလမ်းလျှောက်သွားသည်။ ၎င်းတို့သည်အရင်းအမြစ်များထပ်ထည့်မည်ဆိုပါက၎င်းတို့၏ရာထူးကိုနှိပ်ပါ။
တစ်ဦးကိုရွေးချယ်ပါ အကွောငျး သင်သာပို့ဆောင်နိုင်သည်။ သင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်၊ မနိုင်ဆိုတာသိရန် iTunes, Spotify, SoundCloud နှင့် Google Play တို့ကိုသေချာစွာစစ်ဆေးပါ။
ညာဘက်ကိုရယူပါ မိုက်ခရိုဖုန်း။ ငါ့အထဲကစစ်ဆေးပါ နေအိမ်စတူဒီယို နှင့်ဤနေရာတွင်ပစ္စည်းကိရိယာများအကြံပြုချက်များ။
ဘယ်လိုသင်ယူ ပြင်ဆင်ရန် လိုမျိုးတည်းဖြတ်တဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုသုံးပြီးသင်ရဲ့ podcast ကို AudacityGarageband (Mac အတွက်သာ) Adobe ကစာရင်းစစ် (Adobe ၏တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ cloud suite နှင့်အတူ) အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းများနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများများပြားလာသည်။
သင်၏ Podcast တခုကိုအသံသွင်းပါ ဗီဒီယို ဒါကြောင့်သင်က Youtube ကို upload လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်များများအံ့အားသင့်နေတာလဲ နားထောင် Youtube သို့
ရယူ hosting အထူး podcasts တွေကိုအဘို့အ built ။ Podcast များသည်ကြီးမားသော streaming files များ ဖြစ်၍ သင်၏ပုံမှန် web server သည်လိုအပ်သည့် bandwidth ကိုပိတ်ဆို့လိမ့်မည်။
ကျနော်တို့ဘယ်မှာမှအပေါ်တစ် ဦး In-depth ဆောင်းပါးရှိသည် သင့်ရဲ့ Podcast တခုကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်စုစည်းပြီးမြှင့်တင်ပါ သင်အားသာချက်ယူနိုင်သည့်ကွဲပြားခြားနားသော host များ၊ စုစည်းခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ရေးလမ်းကြောင်းများအားလုံးကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
ငါ့အတွက် go-to အရင်းအမြစ်နောက်တစ်ခုတစ်ခု (ကြီးစွာသော podcast တစ်ခုနှင့်အတူ) ဖြစ်သည် Brassy အသံလွှင့်ကုမ္ပဏီ။ ဂျင်ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူများကသူတို့၏စီးပွားရေး podcasting ဗျူဟာကိုစတင်တည်ဆောက်ရန်ကူညီခဲ့သည်။
Oh, နှင့်စာရင်းသွင်းရန်သေချာပါစေ Martech Zone အင်တာဗျူး, ငါ့ Podcast တခုကို!
Tags: Podcast တခုကိုဘယ်လိုစတင်ရမလဲpodcast တည်းဖြတ်ခြင်းpodcast အယ်ဒီတာများpodcast မိုက်ခရိုဖုန်းpodcast စာရင်းဇယားpodcast ဗျူဟာများpodcast အကြံပေးချက်များpodcasting အကြံပေးချက်များPodcast တခုကိုစတင်ပါ